#StayAtHome - Isi Nne na Nna | Lọ Akwụkwọ Oakleigh na Early Early Intervention Center
Ihe omumu ulo akwukwo
Channellọ Akwụkwọ YouTube nke Oakleigh
Ihe onyonyo vidio nke Otu -lọ Akwụkwọ Na-ahụ Maka withlọ Akwụkwọ mepụtara iji soro nwa gị.
Egwuregwu Ngwakọta Ngwakọta Na-adịghị Mma (PDF Nhazi ederede)
Ọrụ ụlọ maka ụmụaka 5 na ezinụlọ ha
Oakleigh Blog Ederede
Ndụmọdụ ụmụ amaala Barnet nyere n'oge Coronavirus (Covid -19) Ọrịa
Enyemaka Ndị Nwanyi Na-enyere Ndụ na Barnet na-enye nkwado nzuzo
Barnet Community Hub - Enyemaka-19-Covid
Ndị otu London Autism Group Charity
BBC Otu - N’ime Autism: Obere ntakịrị anwansi
Ozi Enyemaka Ozi Covid-19
TES Zigara Mkparịta ụka na Webinars
Ihe enyemaka na ndumodu nye ndi nne na nna
Nke a bụ ụfọdụ ozi bara uru na iji Bugharịa ihe ngosi vidiyo na vidiyo na-ewu ewu nke ndị nkuzi Oakleigh ji ụmụ akwụkwọ na ezinụlọ.
Budata Mbugharị Ozi Mpempe akwụkwọ
Barnet CIT Mmemme Ọzụzụ Universal 2021
Budata Barnet zuru CIT (Usoro ọgwụgwọ agwakọtara ụmụaka) Mmemme Ọzụzụ Universal 2021 maka ndị nne na nna na ndị ọrụ yana Ozi Ọzụzụ.
Barnet Mpaghara Nye - SENCO Mpaghara Blog
Barnet kere ozi na Onyinye Mpaghara ha ịkekọrịta akụrụngwa na njikọ bara uru iji kwado ezinụlọ na ndị na-arụ ọrụ na ụmụaka na ndị na-eto eto nwere mkpa agụmakwụkwọ na nkwarụ pụrụ iche n'oge a.
E kewara ozi ahụ na ngalaba ndị a:
Ozi Homelọ N'ụlọ maka ndị nne na nna / ndị nlekọta
Ihe enyemaka sitere na ntọala ọkachamara anyị
Ihe eji akwado ulo akwukwo
Barnet Autism Advisory Team Ndị Nne na Nna
Barnet ekwuputala iwebata hotel iji kwado ndị nne na nna nke ụmụaka autistic / YP bi na Barnet. Ebumnuche nke hotline a bụ iji mkparịta ụka mmekọrịta mmadụ na ibe ya, ụkpụrụ mmụọ na agụmakwụkwọ site na ịtụ aro na / ma ọ bụ ịnweta ọrụ ndị ọzọ. Ha nwere ike ịkwado ndị nne na nna kpọmkwem n'ihe ndị a; ụkpụrụ mmetụta uche, ịtọlite ​​usoro ihe omume na ihe omume na ụlọ, nkwukọrịta, na nkwado maka agụmakwụkwọ ụlọ.
Rịba ama na nke a abụghị hotline na-enweghị aha na ozi a ga-ekenye ndị ọkachamara dị mkpa dịka ọ dị mkpa.
Igwe ekwentị ahụ ga-arụ ọrụ 10am ruo 11am, Monday - Friday, site na 20 Eprel, 2020
Nọmba ekwentị bụ 020 8359 3167
Ekwentị oku nwere ike ịdịru a kacha nke 20 nkeji.
LGfL (London Grid maka Mmụta) SEN Resources *
Nsonye Akụ Center
Na LGfL, enwere ọtụtụ ihe enyemaka nke na-akwado nsonye. Site na ebe nchekwa akụ a, ị nwere ike chọọ ma chọta akụ ga-akwado gị na nwa gị nke ọma. Nke a bụ nhọrọ nke ihe dị:
Ihe na-enweghị Ọrụ
Ihe ngosi Widgit
* Biko mara na LGfL Resources n'èzí ụlọ akwụkwọ chọrọ nbanye. Biko jụọ onye nkụzi klas gị maka ozi nbanye gị ma ọ bụrụ na ịnweghị.
Nweta Ihe Ntanetị N'efu *
HelpKidzLearn - Egwuregwu na Ọrụ
Akaụntụ ego efu ma ọ bụ Akaụntụ daybọchị 14. 100 + Egwuregwu & Ihe omume enwere ike iji iji òké na keyboard, ịgbanwee (es), ihuenyo mmetụ, ngosipụta klaasị mmekọrịta, mkpanaka ọ ,ụ, bọl na anya.
Twinkl Free Account Nye
Twinkl mepụtara koodu maka ụlọ akwụkwọ n'oge mkpọchi nke na-enye ndị nkuzi na ndị nne na nna ohere ịnweta akụ ha niile. Enwere ike ịnweta nke a site na ịga na www.twinkl.co.uk/offer na iji koodu CVDTWINKLHELPS. Leekwa: https://www.twinkl.co.uk/blog/how-to-utilise-twinkl-during-the-coronavirus-shutdown-a-guide-for-schools'
Widgit Online - Ọnwụnwa ụbọchị 21 n'efu
Mepụta nkwado, nkwukọrịta na mmụta na-akwado na ihe nchọgharị weebụ gị site na iji ihe karịrị 18,000 Ihe ngosi Widgit na ọtụtụ narị ndebiri ndebiri dị mfe.
BBC Cbeebies - Ihe Pụrụ Iche
Iji asụsụ ogbi a na-akpọ Makaton, Justin na Mr Tumble na-enyere ụmụaka aka ịmụta otu esi ekwurịta okwu na ịzụlite asụsụ asụsụ n'ụzọ dị ụtọ ma na-atọ ụtọ.
BBC na-akuzi nkuzi n’ụbọchị
BBC na-enye izu ụka iri na anọ nke mmemme agụmakwụkwọ na ihe nkuzi nye ezinụlọ ọ bụla na mba ahụ na-ewepụta nkuzi kwa ụbọchị maka ndị ọgbọ niile.
Mmetụta App House Ltd.
A na-enweta ọtụtụ ngwa maka ụmụ akwụkwọ nwere nghọta nwere nghọta miri emi na ọtụtụ (PMLD) ma ọ bụ Siri ike mmụta siri ike (SLD). Ihe niile na-emekọrịta ihe ma ọtụtụ anaghị achọ ikike ịchịkọta ikike.
Mmetụta Sensory - Ihe Nchịkọta-19
Echiche mmetụta uche maka mmụta ụlọ, na-enyekwa njikọ maka oge ndụ ndị mmadụ na-agba ọsọ gụnyere Soundabout, TAC PAC na akụkọ ịhịa aka n'ahụ.
Sense Play Ngwá Ọrụ
Ozi maka ndị nne na nna banyere otu esi agakwuru egwuregwu maka ụmụaka nwere mkpa mmụta siri ike.
Gina Davis Ntị Autism
Gina na-ekerịta vidiyo nke ihe omume na Facebook peeji nke ị nwere ike ịnwale n'ụlọ.
Gemiini bụ usoro ọgwụgwọ n'ịntanetị nke na-eji usoro a na-akpọ Nlereanya Video Pụrụ Iche - ụzọ a na-ahụ maka ahụike iji bulie asụsụ, ọgụgụ, na mmekọrịta mmadụ na ibe. Ọ na-agbasa ozi na 'ọta' na-adị mfe nghọta. Ọnwụnwa ụbọchị 7 n'efu.
* Rịba ama na ụfọdụ ọrụ ntanetị nwere ike ịchọ ịkwụ ụgwọ mgbe ikpechara n'efu.
Covid-19 Coronavirus Enyemaka na Ndụmọdụ Maka Ndị Nne na Nna
Enyele ma ndị ọzọ na ndị ọzọ na oké ndụmọdụ (eg ego nkwado, ọdịmma, wdg) n'ihi na ezinụlọ nke ụmụaka nwere nkwarụ.